Aung Pwar | English WPC (Wood Plastic Composite)
Plantation Teak Finger Joint
Choose Language : Myanmar English Find us on Facebook
09 266226651 [email protected]
WPC သစ်သား - ပလပ်စတစ်ဖွဲ့စည်းမှုသည် စွန့့်ပစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သော လွှစာမှုန့်၊ သစ်သား အမှှုန့်နှင့် သာမိုပလပ်စတစ် တို့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ပုံစံခွက်ထဲတွင် ထည့်ကာလိုအပ်သော သစ်သားအပြား ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ WPC သည် သစ်မှုန်(70%)နှင့် Plastic (30%) ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကို မထိခိုက်သော ရေစိုခံ ကြမ်းခင်းပြား ဖြစ်ပါသည်။
WPC သည် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ interior and landscape လုပ်ငန်းများ တွင် သဘာ၀ သစ်သား အစားထိုးပစ္စည်းများ အဖြစ် အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ရေညှိတက်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ရေကူးကန် Decking နှင့် Outdoor အိမ်ကြမ်းခင်းပြား အဖြစ် အသုံးများပြီး စားသောက်ဆိုင်၊ Indoor ကြမ်းခင်းနှင့် ခြံစည်းရိုး ကာရာ တို့တွင်လည်း အလှဆင် အသုံးပြုကြပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် WPC ကို လက်ရန်းများ၊ ခြံစည်းရိုးများ၊ သစ်သားကြမ်းခင်းများ၊ နံရံအကာများ၊ ပန်းခြံသုံး ခုံတန်းရှည်များ၊ သစ်သားဖြင့် ပုံဖော်ပစ္စည်းများ၊ ပြတင်းပေါက်နှင့် တံခါးဖရိန်များ၊ အိမ်တွင်းသုံး ပရိဘောဂများ အနေနှင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ WPC စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့တာကတော့ 1990 ခုနှစ် အစောပိုင်းဖြစ်ပီး ကြမ်းခင်းလောက တွင် စတင် မိတ်ဆက် ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
WPC ကို အသုံးပြုခြင်းသည် အခြားသော သစ်သား၊ သစ်အစားထိုး ပစ္စည်းများ ထက် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်မှု နည်းပါးပြီး ၁၀နှစ်ထိ အရောင်မပြောင်းပါ။ တနှစ်တခါ ဆေးပြန်လည်သုတ်စရာမလိုပါ။
ပူပြင်းတဲ့နေဒဏ် , မိုးဒဏ် , အေးလွန်းတဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကျုံ့ခြင်းပွခြင်း မရှိပါ။
သစ်ရှားပါးလာတဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ WPC ကို သစ်အစားထိုးအနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် သစ်တောပြုန်းတီးမှုကိုလဲ လျော့ကျစေပါမယ် ။ သစ်သား အပိုင်းအစတွေကို ထင်းအဖြစ် သုံးမယ့်အစား အမှုန့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး စွန့်ပစ်ပလပ်စတစ်နဲ ရောစပ်ကာ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် Green material လဲဖြစ်ပါတယ် ။
Address : No (A1), Room (306), Aung Chan Thar Condo, Aung Chan Thar Street, 13 ward, Yankin Township, Yangon, Myanmar.
Phone : 09 799595011, 09 266226651, 09 266226652
Yangon Branch (1) :
Address : No (1565/1566) Kyan Sit Thar Road, 13 ward, East Dagon Township, Yangon, Myanmar.
Yangon Branch (2) :
Address : Block (53), Room(7), Nilar (2) Street , SawBwarGyiGone , Yangon, Myanmar.
Mandalay Branch :
Address : No (Ma-12) , Coner of (58) Street & (43) Street , Ye Mon Taung Quarter , Ma Harr Aung Myay Township , Mandalay.
TaungGyi Branch :
Address : No(8/9) , Near Mai Sone Hotel , (3) Quarter , AyeTharYar New Township, Taunggyi.
AungLan Branch :
Address : No (30,31) ,Pyay Street , SatYoneYat , PyayThawAye , AungLan.
Address : Block(2) , Room(3) ,BuTarTikeTan , Thakhin Natt Phay Street , MyintKyiNarr.